भूमिगत त ती तत्त्वछन् जसले क्रान्तिमा धोका दिएकाछन्, गद्दारी गरेका छन् – विप्लव, महासचिव, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी – eratokhabar
ई-रातो खबर २०७५, २९ कात्तिक बिहीबार १२:१५ November 15, 2018 484 Views
»» तपाईंको पार्टी नेकपासित वार्ताका लागि डबल नेकपाको केपी ओली सरकारले वार्ताटोली बनायो तर अस्वीकार गर्नुभयो । किन अस्वीकार गर्र्नुभएको हो ?
»» नेपाली राजनीति आउने १० वर्षमा कहाँ पुग्ने देख्नुहुन्छ ? नेपाल र नेपाली सर्वसाधारण जनताको जीवनस्तर कहाँनेर देख्नुहुन्छ ?
»» तपाईंलाई कतिपयले ‘प्रचण्ड भाग दुई’ का रूपमा अथ्र्याइरहेका छन् । सर्वसाधारण जनताले अबको परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने तपार्इं हो भन्ने विश्वास दिलाउने आधार केके छन् ?
»» केपी ओली नेतृत्वको डबल नेकपासहित काङ्ग्रेस पनि आर्थिक समृद्धिकै कुरा गरिरहेको छन् । समृद्धि भन्ने शब्द नेपाली राजनीतिक बजारमा खुबै चर्चामा छ । यसबारे तपार्इंको धारणा के हो ?
»» चुनावताका सयौँ बम पड्के । तपार्इंंकै कार्यकर्ता पनि घाइते भए । एकजना त मारिए । किन तपार्इंको पार्टी यसबारे मौन बसेको हो ? जिम्मा नलिएको हो कि लिन नमिलेको हो ? कारण के हो ?
»» तपार्इंं र तपाईंको पार्टी नेता/कार्यकर्ता भूमिगत छन् भन्ने चर्चा सुनिन्छ । किन ?
»» नेपालमा तपाईंले देखेका तीन मुख्य समस्या केके हुन् ?
»» तपाईंको पार्टीले जनयुद्धको ‘लिगेसी’ लिन्छु र म नै हुँ असली माओवादी भनेर दाबी त गरेको छ तर पत्याउने आधार के छन् ? विचार मात्र राखेर नपुग्ला । लडाइँ गर्नु परे सेना पनि चाहिएला । छ त तपाईंको पार्टीसित सेना ? छ भने लड्न सक्ने जति छ त ?
ठिकै भन्नुभयो । जनयुद्ध मात्र होइन, नेपाली क्रान्तिहरूको उत्तराधिकारी हामी र हाम्रो पार्टी हो । त्यो मुख्यतः सैद्धान्तिक विचारकै कारणले हो । जहाँसम्म सेनाको कुरा उठाउनुभयो, सेना दुईवटा शक्तिसँग मात्र हुन्छ : एउटा सत्ता सञ्चालन गर्ने वर्गसँग, अर्को प्रतिक्रियावादी सत्तालाई मिल्काउन चाहने क्रान्तिकारी वर्ग र शक्तिसँग । जनमुक्ति सेनाका बारेमा अब सायद सत्य कुरा भन्ने वेला भयोजस्तो लाग्छ । प्रचण्ड—बाबुरामहरूले महान् जनमुक्ति सेना विसर्जन गर्दा नै हामीले प्रतिरोध गरेका थियौँ र क्रान्तिलाई साथ दिन चाहने जनमुक्ति सेनाका कमान्डरहरूको भेला गरेका थियौँ । त्यसमा कम्पनी सहकमान्डरभन्दा माथिका मात्र ४०० भन्दा बढी भेला भएका थिए । पछि हामीले सदस्यहरूको पनि देशैभरि भेला ग¥यौँ । जब किरणसँग हामीले विद्रोह ग¥यौँ त्यसको एउटा कारण यही थियो । पछि हामीले जनमुक्ति सेनाको गौरवपूर्ण इतिहास रक्षा गर्दै जनमुुुक्ति सेनालाई पुनर्गठन ग¥यौँ । आज जनता खाली छैनन् । जनतासँग क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने महान जनमुक्ति सेना छ । यसको सङ्ख्या तपाईले भनेजस्तो केकति भन्नेतिर नजाऔँ । क्रान्ति सञ्चालन गर्नसक्ने र विजय हासिल गर्दै जानसक्ने स्तरमा छ ।
»» तपाईंको पार्टीको बाटो के हो ? सशस्त्र हो कि शान्तिपूर्ण ? जनता भन्छन्– देख्दा शान्तिपूर्णजस्तो देखिन्छ फेरि होइनजस्तो पनि देखिन्छ । कार्यकर्तालाई मुद्दा लागेको छ । तिनै कार्यकर्तालाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा पनि पठाउनुहुन्छ ।
यस्ता प्रश्न तपाईं किन सोधिरहनुभएको छ ? अघि पनि भूमिगतको चर्चामै मैले धेरै भनिसकेँ । पहिले पनि धेरै ठाउँमा यसबारे व्याख्या भइसकेको छ । क्रान्ति यति अगाडि बढिरहँदा पनि तपाईंले आदिमकालको जस्तो प्रश्न सोध्नुभयो ! क्रान्ति भनेको के हो ? काङ्ग्रेसले राणाविरुद्ध गरेको क्रान्ति, एमालेले पञ्चायतविरुद्ध गर्न खोजेको तर नसकेको क्रान्ति, प्रचण्डहरूले १० वर्ष चलाएको र पछि बेचेर खान खोजेको क्रान्ति (जनयुद्ध), भोगेर, पचाएर, बुझेर यहाँ पुग्दा पनि यस्तो प्रश्न सोध्ने ! यो त जनतालाई पनि ज्ञान भइसकेको विषय हो ।
»» तपाईं र तपार्इंको दलविरोधीले तपाईं पार्टी त सङ्घीयता, पिछडिएका जाति, क्षेत्र र लिङ्गलाई मूलधारमा ल्याउने समावेशी मुद्दाकै विरोधी भनेर व्याख्या गरिरहेका छन् । साँचो हो भने श्रमजीवी र राज्यसत्ताले डामेका जाति र क्षेत्रलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने तपाईंका आधार केके हुन् ?
»» ओली सरकारले काम गर्न नसके असन्तोष र अस्थिरता दुवै चर्केला । त्यसलाई नेतृत्व गरेर परिवर्तन गर्न कोही त आउलान् नै । तपाईंको पार्टीले नै त्यस्तो वैकल्पिक धार दाबी गर्ने मुख्य आधार केके हुन् ?
(अङ्ग्रेजी अनलाइन https://www.recordnepal.com/wire/comrades-at-war/
मा प्रकाशित महासचिव क. विप्लवको अन्तर्वार्ता नेपालीमा भाषान्तरण गरी प्रकाशित गरिएको हो– सम्पादक ।)
अनेमसंघ क्रान्तिकारी बैतडीको अध्यक्षमा पार्वती